ထံမသီဆည္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ (BRN)
မြန်မာပြည်၏ ဆည်များတည်ရှိရာ မြေပုံ
မြန်မာပြည်၏ ဆည်များတည်ရှိရာ မြေပုံ Dear Visitor, We are using Myanmar3 font in this Map. Please install mm3 font for better viewing in device. ရှမ်းပြည်နယ် ၀ီကီပီးဒီးယား - ရှမ်းပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များအနက် အကြီးဆုံး(ဧရိယာအကျယ်ဆုံး) ပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှအစိုးရလက်ထက်က ပဒေသရာဇ် ရှမ်းပြည်နယ်စုဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သော နယ်များအား လွတ်လပ်သော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဟူ၍ ပေါက်ဖွားလာသောအခါ ပြည်ထောင်စု အခြေခံဥပဒေအပိုဒ် ၅ အရ အဆိုပါ နယ်များတွင် 'ဝ'နယ်များကို ပူးပေါင်း၍ ရှမ်းပြည်နယ်ဟု သတ်မှတ်ပိုင်းခြားခဲ့သော နယ်များကို ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ လေးပုံတစ်ပုံခန့်ရှိ၍ အကြီးဆုံးပြည်နယ်လည်း ဖြစ်၏။ ရှမ်းပြည်နယ်သည် ရေတံခွန်စိမ့်စမ်း တောစခန်း တောင်စခန်းတို့ဖြင့် သာတောင့်သာယာရှိပေသည်။ ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ် ၀ီကီပီးဒီးယား - ကယားပြည်နယ် (ယခင်အမည် ကရင်နီပြည်နယ်) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်နယ် တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ မြောက်ဖက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ အရှေ့ဖက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် တောင်ဖက်တွင် ကရင်ပြည်နယ်တို့ ဝန်းရံလျက်ရှိသည်။ မြို့တော်မှာ လွိုင်ကော်မြို့ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ လူဦးရေမှာ ၂၇၂,၇၃၀ ဖြစ်သည်။ ကယားပြည်နယ်တွင် ကရင်နီလူမျိုးဟု ခေါ်ဝေါ်သော ကယားလူမျိုး အများစု နေထိုင်ကြသည်။ မန္တလေးတိုင်း ီကီပီးဒီးယား - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ အရှေ့ဖက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ အနောက်ဖက်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ဖက်တွင် နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနှင့် မြောက်ဖက်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့က အသီးသီးဝန်းရံလျက်ရှိသည်။ တိုင်းဒေသကြီး၏ မြို့တော်ဖြစ်သော မန္တလေးမြို့၌ မြန်မာတို့၏ နောက်ဆုံးမင်းများ စိုးစံခဲ့သော မြနန်းစံကျော် ရွှေနန်းတော်တည်ရှိသည်။ ပထမမြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သော ပုဂံမြို့ဟောင်းမှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်း၌ တည်ရှိပြီး လက်ရှိ အစိုးရအဖွဲ့များ ရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှ ပတ်ပတ်လည် ဝန်းရံထားသည်။ မကွေးတိုင်း ီကီပီးဒီးယား - မကွေးတိုင်းဒေသကြီး (အင်္ဂလိပ်: Magway Region သို့မဟုတ် Magwe Region၊ ယခင်အမည် မကွေးတိုင်း) သည် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေ တစ်ခုဖြစ်သည်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းဒေသကြီး ခုနစ်ခုအနက် ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်ကာ ၄၄,၈၂၀ square kilometres (၁၇,၃၀၆ sq mi) ကျယ်ဝန်းသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ီကီပီးဒီးယား - ရခိုင်ပြည်နယ် သည် ရခိုင်လူမျိုးတို့ အစဉ်တစ်စိုက် နေထိုင်သော ပြည်နယ်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ရှေးအခါက ရခိုင်ဘုရင်များ အုပ်စိုးရာ တိုင်းပြည်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့၏။ အေဒီ ၁၅ ရာစုမှ ၁၇ ရာစုအတွင်း ရှေးရခိုင်ဘုရင်များသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ စစ်တကောင်းဒေသနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တြိပူရဒေသတို့ကို လက်အောက်ခံ အဖြစ် သိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ရခိုင်ဘုရင်များ တန်ခိုး အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိစဉ် ရခိုင်ဘုရင့်နိုင်ငံ၏ အကျယ်အဝန်းသည် ယခု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ဒါကာမြို့တော်မှ မော်လမြိုင် ပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက် ကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်။ ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ မူရင်း ရခိုင်ပြည် သည် ဘင်္ဂလားနယ်စပ် နတ်မြစ်ဝမှ မော်တင်စွန်း (ယခု ဧရာဝတီတိုင်းနယ်မြေ) အထိ ရှည်လျားသော ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသ ဖြစ်သည်။ ကရင်ပြည်နယ် ီကီပီးဒီးယား - ကရင်ပြည်နယ်သည် ၁၁,၇၃၁ စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်းသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်တည်ရှိတည်ရှိပြီး မွန်ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိသည်။ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၅ ဒီဂရီ ၄၅မိနစ် မှ ၁၉ ဒီဂရီ ၂၅မိနစ် အတွင်း၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၀မိနစ် မှ ၉၈ ဒီဂရီ ၂၈မိနစ် အတွင်း တည်ရှိသည်။ ဧရိယာစုစုပေါင်း ၁၁,၇၃၁ စတုရန်းမိုင်း ကျယ်ဝန်းသည်။ တနင်္သာရီတိုင်း ီကီပီးဒီးယား - တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး (အင်္ဂလိပ်: Tanintharyi Region၊ မွန်: ဏၚ်ကသဳ သို့မဟုတ် တနၚ်သြဳ}}၊ ယခင်အမည် တနင်္သာရီတိုင်း) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အောက်ဖက်အကျဆုံး တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြို့တော်မှာ ထားဝယ်မြို့ဖြစ်သည်။ အခြားအရေးပါသည့် မြို့များမှာ မြိတ်မြို့နှင့် ကော့သောင်းမြို့များ ဖြစ်သည်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ လူဦးရေမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ ၁,၄၀၈,၄၀၁ ဖြစ်သည်။ မွန်ပြည်နယ် ီကီပီးဒီးယား - မွန်ပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်ဖက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနှင့် ထိစပ်လျှက်ရှိသည်။ ပဲခူးတိုင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းတို့နှင့်လည်း နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်လျှက်ရှိသည်။အနောက်ဘက်တွင် မုတ္တမကွေ့ ဖြင့် ထိစပ်နေသည်။ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၅၂မိနစ် နှင့် ၁၇ ဒီဂရီ ၃၂မိနစ်ကြား၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၅၁မိနစ် နှင့် ၉၈ ဒီဂရီ ၁၃မိနစ်ကြားတွင် တည်ရှိသည်။ ဧရိယာစုစုပေါင်း ၄၇၄၇.၈ စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်းသည်။  မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရှေ့တောင်ပိုင်း ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သော မွန်ပြည်နယ်၏ အနောက်ဖက် နယ်နမိတ်ကို ကပ္ပလီပင်လယ်၊ မြောက်ဖက်ကို ပဲခူး၊ အရှေ့ဖက်ကို ကရင် နှင့် တောင်ဖက်ကို တနင်္သာရီတို့က ဝိုင်းရံ လျက်ရှိပါသည်။ မွန်ပြည်နယ်သည် စတုရန်းကီလိုမီတာ ၁၂၂၉ ကျယ်ဝန်းပြီး၊ မြို့နယ် ၁ဝ မြို့နယ်ပါဝင်ကာ၊ မော်လမြိုင်သည် မြို့တော်ဖြစ်သည်။ လူဦးရေမှာ ၂.၁၂ သန်း (၂ဝ၁၁ HMIS အချက်အလက် များအရ) ရှိပြီး၊ စတုရန်း ၁ ကီလိုမီတာလျှင် လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုနှုန်း ၁၇၂ ဦးရှိပါသည်။ လူဦးရေ၏ ၂၃% သည် မြို့ပြ ဒေသများတွင် နေထိုင်ကြပြီး၊ ကျန်ရှိသော ၇၇% မှာ ကျေးလက် ဒေသများတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်း ီကီပီးဒီးယား - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် ၁၄ ခုတို့တွင် အကျဉ်းဆုံးဖြစ်ပြီး လူနေအထူထပ်ဆုံးလည်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့တို့ဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။ မြို့တော်မှာ ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီတိုင်း ီကီပီးဒီးယား - ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးသည် မြန်မာပြည်၏ ဆန်စပါးအဓိကထွက်ရှိရာ ဒေသဖြစ်သည်။ ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၃,၅၆၆ ကျယ်ဝန်းသည်။ လူဦးရေ ၆.၅ သန်းခန့်ရှိပြီး လူနေသိပ်သည်းမှုမှာ တစ်စတုရန်းမိုင်လျှင် ၄၆၆ ယောက် ဖြစ်သည်။ ဗမာနှင့်ကရင်လူမျိုးတို့ အဓိကအားဖြင့် နေထိုင်ကြပြီး အနောက်ဘက်က ကမ်းရိုးတန်းတလျောက် ရခိုင်လူဦးရေအနည်းငယ် နေထိုင်ကြသည်။ အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အနည်းငယ် နေထိုင်ကြပါသည်။ ဗမာဘာသာစကားသည် အဓိကဘာသာ‌စကား ဖြစ်ပါသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၏ အကျယ်အဝန်းမှာ ၁၃,၅၆၇ စတုရန်းမိုင် ဖြစ်၍ မြို့နယ် ၂၆ မြို့နယ် ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပဲခူးတိုင်း ီကီပီးဒီးယား - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းဒေသကြီးခုနှစ်ခုတွင် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်သည်။ မြို့တော်မှာ ပဲခူးမြို့ (ဍုၚ်ဗဂေါ)ဖြစ်သည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လူဦးရေမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ ၄,၈၆၇,၃၇၃ ဦး ဖြစ်သည်။ ချင်းပြည်နယ် ီကီပီးဒီးယား - ချင်းပြည်နယ် သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဖက်အကျဆုံး ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ချင်းပြည်နယ်သည် အကျယ်အဝန်း ၃၆,၀၁၉-square-kilometre (၁၃,၉၀၇ sq mi) ရှိပြီး တောင်ဖက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ အနောက်တောင်ဖက်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ အရှေ့ဖက်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဖက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဏိပူရပြည်နယ်နှင့် အနောက်ဖက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်တို့ဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။ ပြည်နယ်၏ မြို့တော်မှာ ဟားခါးမြို့ ဖြစ်သည်။ ချင်းပြည်နယ်သည် တောင်တန်းထူထပ်မှုကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံးနေရာ ဖြစ်သည်။ ကချင်ပြည်နယ် ီကီပီးဒီးယား - ကချင်ပြည်နယ်သည် မြန်မာပြည်၏ မြောက်ဘက်ဆုံးအပိုင်းတွင် ရှိသည်။ ကချင်ပြည်နယ်၏အရှေ့နှင့် မြောက်ဘက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် အနောက်ဘက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ တည်ရှိသည်။ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂၃ ၂၇' နှင့် ၂၈ ၂၅' လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ၀' နှင့် ၉၈ ၄၄' ကြားတွင် တည်ရှိသည်။ ကချင်ပြည်နယ်သည် ဧရိယာ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း (၃၄၃၇၉ ဒသမ ၂၂ ) ကျယ်ဝန်းသည်။ ကချင်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်မှာ မြစ်ကြီးနားမြို့ဖြစ်သည်။ အခြားသော အဓိကမြို့မှာ ဗန်းမော်မြို့ဖြစ်သည်။ ကချင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ နာဂ စသည့် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ အတူတကွ ပူးပေါင်းနေထိုင်ကြသည့် ပြည်ထောင်စုငယ်တစ်ခုအသွင် တည်ရှိနေသည်။ လက်ရှိလူဦးရေ ၁,၅၅၉,၈၃၉ ခန့်ရှိသဖြင့် ပျမ်းမျှလူနေသိပ်သည်းမှုမှာ တစ်စတုရန်းမိုင်လျှင် ၄၅ ယောက်ဖြစ်သည်။ တောတောင်ထူထပ်သော ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်များဖြစ်သော ခါကာဘိုရာဇီ (၁၉,၂၉၆ ပေ)နှင့် ဂမ်လန်ရာဇီ (၁၉,၁၄၂ ပေ) စသည့် တောင်ထိပ်များတည်ရှိကာ ဆီးနှင်းရေခဲများ အမြဲဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ အကျယ်ဆုံးလွင်ပြင်များမှာ ချင်းတွင်းမြစ်ဖျားရှိ တနိုင်းခမြစ်ဝှမ်းမှ ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းဒေသ၊ မလိခမြစ်ဝှမ်းရှိ ပူတာအိုလွင်ပြင်၊ မြစ်ကြီးနားနှင့် ဗန်းမော်မြို့ဝန်းကျင်ဒေသများ၊ အင်းတော်ကြီးကန်၊ မိုးကောင်းချောင်း၊ ကောက်ကွေ့ချောင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများဖြစ်ကြသည်။ ကချင်ပြည်နယ် ီကီပီးဒီးယား - ကချင်ပြည်နယ်သည် မြန်မာပြည်၏ မြောက်ဘက်ဆုံးအပိုင်းတွင် ရှိသည်။ ကချင်ပြည်နယ်၏အရှေ့နှင့် မြောက်ဘက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် အနောက်ဘက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ တည်ရှိသည်။ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂၃ ၂၇' နှင့် ၂၈ ၂၅' လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ၀' နှင့် ၉၈ ၄၄' ကြားတွင် တည်ရှိသည်။ ကချင်ပြည်နယ်သည် ဧရိယာ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း (၃၄၃၇၉ ဒသမ ၂၂ ) ကျယ်ဝန်းသည်။ ကချင်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်မှာ မြစ်ကြီးနားမြို့ဖြစ်သည်။ အခြားသော အဓိကမြို့မှာ ဗန်းမော်မြို့ဖြစ်သည်။ ကချင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ နာဂ စသည့် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ အတူတကွ ပူးပေါင်းနေထိုင်ကြသည့် ပြည်ထောင်စုငယ်တစ်ခုအသွင် တည်ရှိနေသည်။ လက်ရှိလူဦးရေ ၁,၅၅၉,၈၃၉ ခန့်ရှိသဖြင့် ပျမ်းမျှလူနေသိပ်သည်းမှုမှာ တစ်စတုရန်းမိုင်လျှင် ၄၅ ယောက်ဖြစ်သည်။ တောတောင်ထူထပ်သော ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်များဖြစ်သော ခါကာဘိုရာဇီ (၁၉,၂၉၆ ပေ)နှင့် ဂမ်လန်ရာဇီ (၁၉,၁၄၂ ပေ) စသည့် တောင်ထိပ်များတည်ရှိကာ ဆီးနှင်းရေခဲများ အမြဲဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ အကျယ်ဆုံးလွင်ပြင်များမှာ ချင်းတွင်းမြစ်ဖျားရှိ တနိုင်းခမြစ်ဝှမ်းမှ ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းဒေသ၊ မလိခမြစ်ဝှမ်းရှိ ပူတာအိုလွင်ပြင်၊ မြစ်ကြီးနားနှင့် ဗန်းမော်မြို့ဝန်းကျင်ဒေသများ၊ အင်းတော်ကြီးကန်၊ မိုးကောင်းချောင်း၊ ကောက်ကွေ့ချောင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများဖြစ်ကြသည်။ ခေါင်းလန်ဖူးဆည် ပြင်ဇော်ဆည် လကီဆည် လကီဆည် ပန်ဆီ ချီဖွေဆည် ဧရာ၀တီမြစ်ဆုံဆည် လိုင်ဇာဆည် ဒါးပိန်−၂ဆည် ဒါးပိန်−၁ ဆည် ရွေလီမြစ်-၁ဆည် ရွေလီမြစ်-၃ဆည် ရွေလီမြစ်-၂ဆည် အထက်သံလွင်ဆည် Noung Pha & Man Taung ကျိုင်းတုံဆည် ရဲရွာဆည် သံလွင်မြစ် ရွာသစ်ဆည် လောပိတရေအားလျှပ်စစ် ပေါင်းလောင်းအထက်ပိုင်းဆည် ပေါင်းလောင်းအောက်ပိုင်းဆည် ဝဲကြီးဆည် ဒါးဂွင်ဆည် ဟတ်ကြီးဆည် တရုတ် လာအို ထိုင်း အိန္ဒိယ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အန်ဒါမာပင်လယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ၀ီကီပီးဒီးယား - စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသည် ဧရိယာစုစုပေါင်း ၃၆,၅၃၄ စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်းပြီး တိုင်းဒေသကြီး ၇ ခုတို့တွင် အကျယ်ဆုံးလည်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလယ်ပိုင်းမှ မြောက်ထိပ်စွန်းလောက်ထိ တောင်မြောက်ရှည်လျားသော တိုင်းဖြစ်ပြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့ဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂၁ ဒီဂရီ ၃၀မိနစ် မှ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၄ ဒီဂရီ မှ ၉၇ ဒီဂရီ မိနစ် အတွင်း တည်ရှိသည်။ မြို့တော်မှာ မုံရွာမြို့ဖြစ်သည်။ တာမတီဆည် ဧရာဝတီမြစ်၀ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် Existing Dams Proposed & Under Plan Dams ဧရာ၀တီမြစ် ဧရာ၀တီမြစ် ချင်းတွင်းမြစ် မလိခမြစ် အင်မိုင်ခမြစ် ကုလားတန်မြစ် ရွေလီမြစ် မြစ်ငယ်မြစ် မဲခေါင်မြစ် ပေါင်းလောင်းမြစ်
ျမန္မာစစ္အစိုးရက အိႏၵိယႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း [India’s National Hydroelectric Power Corporation (NHPC)] ႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း အေနာက္ဖက္ပိုင္းရွိ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေပၚ တြင္ ထမံသီဆည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာတရပ္ကို သေဘာတူညီလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ထမံသီဆည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ (NHPC) က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းဌာနႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္အသစ္တရပ္ကို ထပ္မံလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဌာန (DHPI) က (NHPC) ႏွင့္ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ ထမံသီဆည္ႏွင့္ ေရႊေဆး ေဆးဆည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။
+ - ဆည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား Click to collapse
အျမင့္။ ၈၀ မီတာ
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၁,၂၀၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW)
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္မႈ။ ၆,၆၈၅ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (Gwh)
+ - ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား Click to collapse
အမ်ဳိးသား ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (National Hydroelectric Power Corporation)
ကိုလင္ကို စြမ္းအင္ အင္ဂ်င္နီယာရင္း လီမိတက္ (Colenco Power Engineering Ltd.)
+ - ဘ႑ာေငြေၾကး Click to collapse
ထမံသီဆည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ခန္႔မွန္း ကုန္က်မႈစရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃,၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။
လွ်ပ္စစ္မ်ားက မည္သည့္ေနရာသို႔ ေပးပို႔မည္နည္း။
ထုတ္လုပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၈၀% ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ပို႔လႊတ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳမည့္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကို မံုရြာသတၱဳတြင္းသို႔ ပို႔လႊတ္အသံုးခ်မည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။
+ - စီမံခ်က္ လက္ရွိအေျခအေန Click to collapse
- (၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန)
ဆည္တည္ေဆာက္မႈကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္း အေသးစိတ္ကို အစီရင္ခံစာ (Master plan) ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ (NHPC) က ျပင္ဆင္ေနပါသည္။
+ - ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ား Click to collapse
ထမံသီဆည္ တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းရွိ လူေပါင္း ၃၀,၀၀၀ ခန္႔ အိုးအိမ္ေရႊ႔ေျပာင္းၾကရမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ၎တို႔အထဲတြင္ ကူကီးလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေက်းရြာ ၃၅ ခု ပါ၀င္ၿပီး ေျမဆီၾသဇာ ႂကြယ္၀သည့္ ေျမဧက ၁၇,၀၀၀ လည္း ေရလႊမ္းမိုးနစ္ျမဳပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ လယ္ဗံုဂ်မ္း (Leivomjang) ႏွင့္ တာေဇာင္း (Tazong) ေက်းရြာမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စု ၃၈၀ ကို အဓမၼေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ထားခဲ့ပါသည္။ ဤေက်းရြာမ်ားမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ထမံသီႏွင့္ ဟုမၼလင္းေဒသအၾကားမွ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ေက်းရြာသားမ်ားကို "ေရႊျပည္ေအး" ဟု အမည္ေပး ထားသည့္ စုစည္းေက်းရြာသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ေစခဲ့ပါသည္။ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးတို႔၏ အမည္မ်ားကို အစြဲျပဳေခၚေ၀ၚထားသည္ဟု ယူဆရပါသည္။) ေျပာင္းေရႊ႔ရသည့္ေနရာသစ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ေျမၾသဇာေကာင္းသည့္ ေျမမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ ရြာသားအမ်ားက ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားၾကပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးစတင္ခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားလည္း ထမံသီဆည္အနီးေဒသမ်ားတြင္ တိုးတက္မ်ားျပားလာပါသည္။
ထမံသီ ေဘးမဲ့ေတာဧရိယာ၏ ၆% ေက်ာ္သည္လည္း ဆည္ေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးနစ္ျမဳပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာမ်ား တြင္ ယခုအခါ တကမၻာလံုး၌ ရွားပါးေနၿပီျဖစ္သည့္ ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါမ်ား ျဖစ္ေသာ Panthera tigris က်ားမ်ား၊ Elephus maximus ဆင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေတြ႔ရမ်ားသည့္ အခြံမာ Kachuga travittata လိပ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အျခားေနရာ မ်ားတြင္ မည္သည့္ေနရာ၌ ေတြ႔ရွိႏိုင္မည္ကို မသိၾကရေသာ္လည္း ဤေနရာမ်ားမွ အၿပီးတိုင္ ေပ်ာက္ကြယ္ဆံုးရႈံးၾကရ ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာစစ္အစိုးရက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တခုကို ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း အကဲျဖတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမွာ ၿပီးစီးျခင္း မရွိေသးသလို သူတို႔အတြက္ လံုေလာက္ေအာင္လည္း အခ်ိန္ မေပးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားက မွတ္တမ္းျပဳစုခဲ့ၾကရာတြင္ ငွက္မ်ဳိး ၃၃၂ မ်ဳိး၊ ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါ ၅၉ မ်ဳိးႏွင့္ အင္းဆက္ ပိုးမႊား ၃၃၃ မ်ဳိး၊ တြားသြားသတၱ၀ါ ၅၇ မ်ဳိး၊ ငါး ၆၇ မ်ဳိး၊ အပင္ ၅၂၆ မ်ဳိး ရွိေနသည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔ အနက္ အခ်ဳိ႔မွာ ရွားပါးသည့္သစ္ပင္ပန္းမာလ္ မ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္ၿပီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အခြံမာ လိပ္မ်ားမွာ ကမၻာတခုလံုး၌ မ်ဳိးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားဖြယ္ ရွိပါသည္။ အကဲျဖတ္ေလ့လာခဲ့သည့္ အဖြဲ႔က အေရးႀကီးဇီ၀ သတၱမ်ဳိးမ်ားကို နစ္နာမႈသက္သာေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။
ဆည္တည္ေဆာက္မႈ စတင္ခ်ိန္မွစ၍ အဓမၼေရႊ႔ေျပာင္းရန္ ေစခိုင္းမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ား ထမံသီေဒသတြင္ ပို၍ တိုးမ်ားလာပါသည္။ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ခန္႔မွန္း အိမ္ေျခ ၃၈၀ ခန္႔ရွိ လိုင္ဗံုဂ်မ္း (Leivomjang) ႏွင့္ တာေဇာင္း (Tazong) ေက်းရြာမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ႏွင္ထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤေက်းရြာမ်ားသည္ ထမံသီႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ဟုမၼလင္းေဒသၾကားတြင္ တည္ရွိေနၾကပါသည္။ ရြာသားမ်ားကို ခ်င္းတြင္းျမစ္ အေရွ႔ဖက္ကမ္းရွိ စုစည္းေက်းရြာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လူအမ်ားအျပားက မေျပာင္းေရႊ႔ၾကဘဲ ျငင္းဆန္ေနၾက ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက ထမံသီဆည္ တည္ေဆာက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မီတီ၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ Anti-Tamanthi Dam Committee သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာပါရန္။
ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အခ်ဳိ႔ကို ႏိုင္ငံတကာ ငွက္မ်ားဘ၀ ထိန္းသိမ္းေရး သတင္းစာ (Birdlife International’s newsletter) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေအာက္ပါလင့္ခ္၌ ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။ http://birdlifeindochina.org/report_pdfs/babbler_21.pdf